Aminny Malagasy, ny zorofirarazana na zoro firarazana dia ny zoro avaratra-andrefana amin ny trano. Omena ny anarana hoe Alahamady na zoronAlahamady koa io zoro io. Zoro saro-pady sy masina indrindra ny Alahamady teo aminny Ntaolo malagasy sy ho anny Malagasy mpandala ny fomban-drazana satria eo no itodihana raha mivavaka amin Andriananahary sy ny razana ary eo no apetraka ireo zava-masina rehetra. Ary izany no maha loham-bintana sy volana voalohany ny Alahamady aminny faritra sasany teto Madagasikara.
Ny Persana na Persiana na Vahoaka persiana na Persana tadrefana, izay monina ao Iràna dia vahoaka iraniana miteny persana na fiteny mifandray amin io fiteny io, sady mitovy kolontsaina sy tantara iombonana. Maro ny Persana monina any ivelan i Iràna. Ny Ntaolo persiana dia vahoaka iraniana izay nifindra monina nankany amin ny faritr i Persisy, izay mifandraika amin ny faritanin i Fars ankehitriny ao amin ny tapany atsimo-adrefan i Iràna, tamin ny taonjato faha-9 tal. J.K. Ny fianakaviambe lehibe indrindra dia mivangongo any Etazonia, any Kanada, any Soeda, any amin ny Emirata Arabo Mitambat ...
Ny hasina dia fanomezana atolotra ny olona na zava-manan-kasina. Fahizay, ny Ntaolo malagasy dia tsy miseho tanam-polo manoloana ny olona na zava-manan-kasina fa mitondra fanomezana toy ny lamba landy, ny tantely, ny akondro ary ny vola tsy vaky. Ny fomba atao aminny fanolorana izany no atao hoe "manasina". Ohatra, raha mandeha aminny olona mahay ody folaka na ody may dia manome azy ny "hasi-tanana", tsy saranny fanorana ny tongotra folaka anefa izany fa ilay hasina ao aminilay olona no isaorana. Raha mankany aminireo kalanoro mpitaiza dia sady manolotra vola no milaza hoe "mitomboa hasina ...
Ny boky aminny anarani Henoka dia boky apokrifanny Baiboly izay nampitondrainny mpanoratra azy ny anarani Henoka. Misy telo ireo boky ireo dia ny Bokini Henoka sy ny Bokinny Tsiambaratelon’i Henoka ary ny Bokinny Lapa. Tsy i Henoka no nanoratra azy ireo sady tsy mitovy ny olona nanoratra azy na dia atao hoe voalohany sy faharoa ary fahatelo aza izy ireo. Ny Jiosy mpanoratra apokalipsa dia nitady anaran’olona malaza sady eken’ny lovantsofina fa afaka ny hiantoka ny fanambaràna izay tian’ireo mpanoratra ireo hampitaina. I Henoka dia lazain’ny Bokin’ny Genesisy fa "niara-nandeha amin’Andriama ...
Ny fiompiana dia fitambaran ireo asa miantoka ny fikarakarana sy ny fampitomboana taranaka ny biby, ka mety ho biby fiompy izany na biby dia, izay atao ho amin ny tombontsoan ny olombelona. Ireo biby ireo dia mipetraka tsy lavitra ny fonenan ny mpiompy azy na ao an-tranony mihitsy aza. Izany dia asa ikendrena, amin’ ny alalan ny fikarakarana, ny fampitomboana taranaka, ary ny fampiasana ny biby fiompy, ho amin ny fanomezana fahafaham-po ny filana ara-pitaovana na ara-tsakafo ary indrindra ara-pamantarana hita maso.
Ny kolontsaini Roanda dia miseho aminny fomba isan-karazany sady manan-karena. Miteny aminny fiteny tokana ny mponina, dia ny fiteny kiniaroanda izay teneninny vahoaka baniaroanda. Manampy anity fiteny ity ny fiteny frantsay sy ny fiteny anglisy ary ny fiteny soahily. Hita ao Roanda ny fivavahan-drazana sy ireo fivavahana roao lehibe dia ny kristianisma sy ny fivavahana silamo. Ny andro Asabotsy farany aminny volana dia anaovanny Roandey ilay atao hoe umuganda, izany hoe androm-pirenena ho anny fanaovana asa miaraka eoanivonny vahoaka isan-tanàna. Manan-karena aminny lafiny dihy sy mozika ...
andavanandro ny ohabolana, fa tena fanaingoana kabary indrindra koa. Teo amin ny Ntaolo malagasy dia haoren - tsaina miampita amin ny alàlan ny lovantsofina toy ny
ambiroa, araka ny finoan - drazana malagasy, dia singa ara - panahy izay inoan ny Ntaolo malagasy fa maharitra aorian ny fahafatesana. Mety hialan ny ambiroany
ambin ny folo sy ny tanàna hafa izay miorina manodidina an Analamanga. Ny Ntaolo dia nanana ny fahendreny notoaviny amanjato taona nandaminany ny toerana
akaiky na lavitra. asehon ny andriamanitra na ny fanahy hafa. Inoan ny Ntaolo malagasy koa ny fisian ny fambara. Mety ho zava - tsoa no hitranga nefa matetika
io zoro io. Zoro saro - pady sy masina indrindra ny Alahamady teo amin ny Ntaolo malagasy sy ho an ny Malagasy mpandala ny fomban - drazana satria eo no itodihana
dia lohahevitra sarotra tsorina. Ny Ntaolo iraniana dia foko ariana sy tsy ariana. Ny Ariana izay atao hoe Ntaolo iraniana, dia nivavaka tamin ny zava - misy
kolontsaina sy tantara iombonana. Maro ny Persana monina any ivelan i Iràna. Ny Ntaolo persiana dia vahoaka iraniana izay nifindra monina nankany amin ny faritr
manomboa ny herinandro amin ny Alahady ary misy ny misafidy andro hafa. Ny Ntaolo malagasy sasany dia nampanomboa ny herinandro amin ny Alakamisy. Arakaraka
hasina dia fanomezana atolotra ny olona na zava - manan - kasina. Fahizay, ny Ntaolo malagasy dia tsy miseho tanam - polo manoloana ny olona na zava - manan - kasina
ny boky nosoratany: , manokana na niaraka tamin olon - kafa: Ohabolan ny Ntaolo 1871, nosoratany sy i J. Parrett Malagasy Kabary 1873 Fomba Malagasy